Wasiir dowlaha Xafiiska R/wasaaraha XFS shir looga hadlayey Bii’adda wadamada ku yaalla Galbeedka Badweynta Hindiya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Wasiir dowlaha Xafiiska R/wasaaraha XFS shir looga hadlayey Bii’adda wadamada ku yaalla Galbeedka Badweynta Hindiya
Wasiir dowlaha Xafiiska R/wasaaraha XFS shir looga hadlayey Bii’adda wadamada ku yaalla Galbeedka Badweynta Hindiya
Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa ka qayb galay shirka 9aad ee Wasiirada Bii’ada ee wadamada ku yaalla Galbeedka Badweynta Hindiya oo ka mid yihiin Soomaaliya , Kenya Tanzania Mozambique iyo Koofur Afrika, kaasi oo ka dhacay Magaaladda Mombasa ee dalka Kenya.
Shirkaan ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen haggaajinta Bii’adda ee dalalka dhaca galbeedka badweynta Hindiya, isbadalka hawada, Daryeelka isticmaalka baddaha iyo arrimo kale.
Wasiirka, ayaa sheegay in Soomaaliya shirkaan wixii ka dambeeyey burburkii dalka aysan ka qeyb gelin, maadaama dalka dhibaatooyin ay ka jireen, isaggoo xusay in hadda dawladda ay diyaar u tahay in hormuud ay ka noqoto shirarka noocaan oo kale.
Wasiiru Dowlaha XafiIska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa tilmaamay in madaxdii kasoo qeyb gashay shirkaasi uu ka hor sheegay in wax laga qabto dhibaatooyinka Soomaaliya ka heysta Kaluumeysiga sharci darradda ah.
“Aniga waxaa si gaar ah uga hadlay dhibaatooyinka naga heysta kaluumeysiga xad gudubka ah ee Soomaaliya lagu hayo, maadaama aan nahay dawlad tabar u heynin badda oo dhan in aan dhowrno, kaluumeysi fara badan ayaa Soomaaliya ka socdo oo sifooyin aan la ictiraafsaneyn loo isticmaalo waxaa ka mid ah .
guuxa maraakiibta faraha badan oo keenaya in Kaluunka uu dido, marka arrimahaasi siddii loo joojin lahaa ayaa ka hadlay” ayuu yiri Wasiir Dowlaha XafiIska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Madaxda kala duwan ee ka socday wadamada ku yaalla Galbeedka Badweynta Hindiya ee ka qeyb galay shirkaasi, ayaa waxay isla qaateen in dhexdooda ay yeeshaan wadashaqeyn wanaagsan.